Mareykanka oo diyaarinayo ciidamo Soomaali ah ee qeyb ka noqondoono ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Mareykanka oo diyaarinayo ciidamo Soomaali ah ee qeyb ka noqondoono ciidamada...
Mareykanka oo diyaarinayo ciidamo Soomaali ah ee qeyb ka noqondoono ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed
Wargeyska caanka ee Africaintelligence.com oo wax ka qora arrimaha sirdoonka ayaa warbixin xasaasi ah ka qoray in dowladda Mareykanka diyaarinayo ciidamo Soomaali ah ee qeyb ka noqondoono ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Warbixinta wargeyska oo ciwaan looga dhigay “Washington waxa ay diyaarinaysaa ciidamo Soomaali ah, oo sanka ka gala Turkiga” ayaa waxaa lagu sheegay in haatan Maraykanka uu diyaarinayo ciidamo Soomaali ah oo hubeysan, kuwaas oo ka mid noqon doono ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sidoo kale warbixinta ayaa sheegeysa in ujeedada uu Mareykanka arrintan ka leeyahay ay tahay inuu hoos u dhigo saamaynta dowladda Turkiga ee ciidanka Xoogga dalka, gaar ahaan kuwa sida gaar ah u tabaraban ee loo yaqaano Kumaandooska Danab.
Africaintelligence.com ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in xukuumadda Washington ay haatan qorsheyneyso in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wareejiso ku dhowaad 100 gaadiidka fud-fudud ah iyo kuwa loo adeegsado dagaalka.
Arrintan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay dhaqaalo ku bixinayaan wadamo Carbeed oo si weyn uga soo horjeeda saamenta Turkiga iyo Qatar ee Afrika, gaar ahaan Somalia.
Mareykanka ayaa dowladda Soomaaliya ka taageero dhinacyada dhaqaalaha iyo dagaalka Al Shabaab, waxaana ciidamo kooban ay ka joogaan gudaha dalka, halka Turkiga uu yahay saaxibka koowaad ee Soomaaliya, isaga oona saldhig ballaaran oo lagu tababaro ciidamada Xoogga dalka ku leh magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Arinkan ayaa ku soo aadaya kadib shalay markii wafdi ka socday dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada Africom ay kulan la yeesheenMadaxweyne Farmaajo.